Muxuu Ahmiyad ugu lahaa Guurka Caa’isha Romano Oo Talyaaniga udhalatay? – XAMAR POST
Muxuu Ahmiyad ugu lahaa Guurka Caa’isha Romano Oo Talyaaniga udhalatay?
By Mohamed Abdi On May 11, 2021
Caa’isha Silvia Romano ayaa la sheegay in ay guursatay ayna ka guurtay gurigii ay ka daganayd magaalada Milan, ka dib markii baraha bulshada loo mariyay aflagaado iyo hadallo badan oo ka dhan ah gabadhaas qaadatay diinta Islaamka, sida uu qoray wargeyska La Stampa ee Taliyaaniga.
Gabadhan ayaa ninka ay guursatay oo lagu magacaabo Paolo P. waxa uu horaan haystay diinta Masiixiga balse dhowaan ayuu ka qaatay diinta Islaamka, waxayna isku guursadeen si waafaqsan diinta Islaamka. Inkastoo arrinta guurka ay hadda soo baxday, haddana waxay is arooseen bishii October ee sannadkii hore.
Lamaanahan ayaa la sheegay inay lahaayeen xiriir qaatay waqti kooban, ka hor inta aysan isguursanin, balse waxay is garanayeen tan iyo yaraantoodii. Wuxuuna diinta Islaamka qaatay ka hor inta aysan is guursanin.
Paolo, ayaa qaatay diinta islaamka si uu u raaco caqiiqada xaaskiisa, sida uu qoray wargeyska Italy24. Balse ma aysan sheegin magaca islaamka ah ee uu qaatay.
Arooska kaddib waxay go’aansadeen inay u guuran magaalo yar oo u dhaxaysa Milan iyo Bologna. Bulshada ku nool magaaladaas ayaa lagu qiyaasay shan kun oo qof, sida uu La Stampa daabacay.
Caa’isha Romano waxay noqotay macallimad barta luqadda Englishka. Waxay dhigtaa iskuul ay wax ku bartaan dadka waaweyn, waxayna sheegtay inay ku faraxsantahay.
Sida ay horay u qoreen qaar ka mid ah warbaahinta Taliyaaniga, Caa’isha Romano ma dooneyso in ay gudbiso dacwad ku saabsan aflagaada iyo hanjabaadda iyo hadallada naceybka ah ee loogu soo gudiyay baraha bulshada
Caa’isha, Markii ay Milan ku noqotay, waxay dib u bilowday nolosheeda caadiga ah, waxayna ku xirnayd masaajid u dhow halkii ay ka degganayd magaalada.
Kenya oo diyaaradaheeda ka mamnuucday inay yimaadaan Soomaaliya
Safarka Madaxweyne Farmaajo Ugu dhoofay Kampala & Wafdiga La socda